Fire egbe egbe na njide: Mkpagbu ndị agha na-aga n'ihu na Mali
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Fire egbe egbe na njide: Mkpagbu ndị agha na-aga n'ihu na Mali
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Mali • News • Tourism • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
A na-akọ na ọgba aghara ndị agha na-aga n'ihu na Mali, ebe akụkọ banyere ọgụ egbe na ọdụ ndị agha na njide nke ndị ndọrọndọrọ ọchịchị a ma ama na ndị isi ndị ọchịagha nọ na-agbanye. Mgbagha a doro anya malitere mgbe izu ole na ole ngagharị iwe na-akpọ ka onye isi ala gbaa arụkwaghịm.
Enweela ọtụtụ akụkọ banyere egbe egbe na isi na Kati, nke dịdebere isi obodo Bamako, nke bụ ebe izizi mbụ nke igba egbe 2012. Ihe mgbasa ozi mgbasa ozi na-egosi na ndị agha na-egbochi ụzọ ndị dị n'obodo ahụ.
O dobeghị anya ego ole ndị agha dara, n'agbanyeghị na otu onye nchekwa aha na-akpọghị aha kwuru, sị: “Ee, nnupụisi. Ndị agha eburu agha. ”
E nwere ihe ngosi na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole n’ime ndị otu nchekwa obodo, bụ ndị na-ewe iwe maka esemokwu ịkwụ ụgwọ, na-etinye aka na nnupụisi ahụ. Enwebeghị nkwenye gọọmentị banyere onye na-agba egbe.
Agbanyeghị, akụkọ ndị gara aga kwuru na ndị agha nwudoro onye isi ndị ọrụ nchekwa nke National Guard n'obodo nchekwa ebe ụfọdụ ndị na-azọrọ na-azọrọ na a tọọrọ Mịnịsta na-ahụ maka Ego na Ego Abdoualye Daffe n'ụlọ ọrụ ya n'ụtụtụ a.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ekwukwa na-ejidekwa Mịnịsta Ofesi na onye na-ekwuchitere omeiwu Malian na ntuli aka pụtara ìhè.
E kwukwara na a kpọpụla ọfịs nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke State Office de Radiodiffusion-Télévision du Mali ka a na-akọ akụkọ banyere otu kọlụm ndị agha na-abanye na mpaghara ahụ iji kwupụta ọkwa ọchịchị n'ihu ọha.
Ndị nnọchi anya mba Norway na France adọọla ndị amaala ha aka na ntị ka ha zobe ebe ahụ ruo mgbe ọnọdụ ahụ doziri.
“A gwala ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ nnọchi anya ndị mmadụ maka mbibi agha na ndị agha na-aga Bamako. Ndị Norway kwesịrị ịkpachara anya ma ọkacha mma nọrọ n'ụlọ ruo mgbe ọnọdụ ahụ doro anya, "ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya Norway kwuru na njikere maka ụmụ amaala ya.
Ọ dịkarịa ala mmadụ 14 anwụọla na ngagharị iwe gọọmentị na-adịbeghị anya na-akpọ oku ka Onye isi ala Ibrahim Boubacar Keita gbaa arụkwaghịm.
Enwere nchegbu na-arịwanye elu na ọgba aghara ọ bụla nwere ike ịkpalite mmegide ọhụrụ site n'aka ndị agha jihadist na-arụ ọrụ na mpaghara ahụ, bụ ndị kwuru na mpaghara ugwu nke mba ahụ dị ka nke ha n'afọ ndị na-adịbeghị anya.